FAMPANDEHANANA SY FIOMPIANA ALIKA KELY, ALIKA KELY 5 HERINANDRO - ALIKA
Fampandehanana sy fiompiana alika kely, Alika kely 5 herinandro
Tao anatin'ny dimy herinandro, nitarina indray ny penina mba hampidirana faritra filalaovana. Penina natao ho an'ny Misty Fomba an-trano kely alika kely.
Misy lovia rano mangatsiaka sy kibble maina misy foana.
Ankizy te hitsako. Nampiana kilalao, kilalao ary mpantsaka.
Fahano sakafo alika kely alona intelo ho an'ny alika kely isan'andro. Manomboha mampihena ny sakafon'ny tohodrano mba hampihena ny famokarana ronono azy, fa tazomy amin'ny sakafon'ny alika mandritra ny herinandro vitsivitsy.
Soso-kevitra momba ny famahanana: Rehefa manome sakafo ny alika kely dia alao mampiasa vifotsy muffin anaty lovia lalina! Tsy afaka mandondona azy izy ireo ary samy mahazo ny lovia keliny avy.
Alika kely Shar-Pei mihinana avy amin'ny vifotsy muffin lovia lalina.
Ankizy kely dimy herinandro dia mianatra fa misy toerana hatoriana sy toerana misy vilany.
Antsoy ny mpitsabo anao ary manendre fotoana mandritra ny 7.5 ka hatramin'ny 9 herinandro (tifitra fanamafisana voalohany). Ny alika kely dia tokony noforonina tao anaty 3 sy 5 herinandro niaraka tamin'ny kankana malefaka, ary mila iray mahery kokoa amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 herinandro. Miresaha amin'ny mpitsabo anao momba izany.
Ny torohevitra momba ny fitifirana alohan'ny 7 herinandro dia tsy torohevitra. Ny tifitra faharoa sy fahatelo dia mila atao aorian'ny 12 herinandro mba hahomby indrindra. Ny torolàlana ankapobeny dia 8, 12 ary 16 herinandro ho an'ny tifitra fanentanana.
Zava-dehibe tokoa ny hisian'ny alika kely ny sain'ny zanak'alika amin'ity vanim-potoana ity, ao anatin'izany ny fotoana tafasaraka amin'ireo mpamadika.
Ny pups mahazo fiaraha-miasa dia mahatsikaritra ny iray amin'ireo alika mankamin'ny faritry ny taratasy hihaona. Ity fiaraha-monina taloha ity dia voaporofo fa mahasoa ilay alika kely amin'ny taona manaraka. Ny fandalinana siantifika dia nampiseho ireo alika izay nahazo ity fiaraha-monina taloha ity dia nampitombo ny habetsahan'ny ati-doha. Tsara kokoa amin'ny famahana olana koa izy ireo ary manao namana mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa.
Ireo alika kely valo ireo dia dimy herinandro monja. Miisa 16 ny poops sy ny pee amin'ny alina, ary eo amin'ny taratasy daholo izany.
'Somary malefaka kely ny seza, raha vao notohako izany. Zava-dehibe ny kankana ny alikanao isaky ny tapa-bolana. Mampiasa kankana malefaka aho amin'ny 2 sy 3.5 herinandro, ary ny iray matanjaka kokoa amin'ny 5 sy 7 herinandro. '
'Amin'ny maraina, rehefa mifoha amin'ity poopako ity aho, dia nosaronako haingana niaraka tamin'ny taratasy hafa iray, araka ny aseho etsy ambony. Avy eo rehefa avy niarahaba sy nisakafo maraina izy rehetra dia ovako daholo ny taratasy rehefa misakafo izy ireo. Tadidio alohan'ny dimy herinandro dia avelanao any ny kotroka maimbo hanintona azy ireo, ary hosaronanao fotsiny. Fa raha vao mahatratra izy ireo ary mampiasa foana ny taratasy dia azonao atao ny manadio azy io ary manova azy bebe kokoa. Aza avela handao ny tampon'akanjo alokaloka ireo alikakely ary hanara-maso hatrany. TSY tadiavinao hosaronan'ny vongan-jaza ny tongotry ny alika kely (na vatana rehefa manomboka milalao sy mihorona izy ireo). Famantarana fa ny alika kely tsy notezaina tamina tontolo madio dia tongotra mavo / volontany. Tadidio fa ity fampiofanana ALOHA avy amin'ny mpiompy ity dia manamora kokoa ny fanabeazan'ny tompony vaovao ny alika kely. '
Te hiteraka ny alikanao ianao
Ny mahatsara sy maharatsy ny alika manafika
Fanampiana sy fiompiana alika kely: taom-pananahana
Fananahana: (Ny tsingerin'ny hafanana): Famantarana ny hafanana
Kalandrie momba ny fitondrana vohoka alika
Torolàlana momba ny fitondrana vohoka
Sarin'ny alika bevohoka X-Ray
Mucus plug amin'ny alika feno
Dingana voalohany sy faharoa amin'ny asan'ny alika
Dingana fahatelo amin'ny asan'ny alika
Indraindray ny zavatra dia tsy mandeha araka ny kasaina hatao
Reny alika saika maty tamin'ny andro faha-6
Olana mampidi-doza amin'ny alàlan'ny alika kely
Na ny Reny tsara aza dia manao fahadisoana
Alika kely: alika maitso
Rano (Walrus) Puppies
C-Sections amin'ny alika
C-Fizarana noho ny alika kely maty
Ny fizarana cesarean maika dia mamonjy ain'alika
Maninona ny alika kely ao amin'ny utero no mitaky c-section matetika
Alika kely: sary misy faritra C
Fetin'ny alika bevohoka 62
Fanampiana sy fiompiana alika kely: Fahaterahana mandritra ny 3 herinandro
Fiompiana alika kely: alika mpiambina nono
Pups 3 Herinandro: Fotoana hanombohana fiofanana amin'ny vilany
Fiompiana alika kely: Pups Week 4
Fiompiana alika kely: Pups Week 5
Fiompiana alika kely: Pups Week 6
Fiompiana alika kely: Pups 6 ka hatramin'ny 7.5 Herinandro
Fiompiana alika kely: alika 8 herinandro
Fitaizana alika kely: Pups 8 ka hatramin'ny 12 herinandro
Manampy sy mitaiza alika lehibe
Mastitis amin'ny alika: tranga miteraka kilalao
Fampisehoana, génétique ary fiompiana
Miezaka mamonjy puppy dachshund manjavona
Tantara momba ny famelomana sy ny fiompiana alika kely: Teraka telo ireo
Whelping and Raising Puppies: alika kely rehetra dia tsy ho velona foana
Fihetsiketsehana sy fiompiana alika kely: antso avo roa heny
Manampy sy mamelona alika kely Preemie feno
Mandeha kely amin'ny alika kely amin'ny maha-zaza
C-Fizarana momba ny alika noho ny tsy fahatomombanan'ny tranonjaza
Matetika mahafaty ny alika ny eclampsia
Hypocalcemia (calcium ambany) amin'ny Alika
SubQ hydrating alika kely
Fanampiana sy fananganana alika kely Singleton
Alika kely tsy tonga volana
Alika kely tsy tonga volana iray hafa
Alika bevohoka mandoka Fetus
Pups roa teraka, Fetus fahatelo voafoka
Mila mamonjy puppy iray ny CPR
Kileman-jaza teraka an-jaza
Puppy misy tadim-poitra mifamatotra amin'ny tongotra
Puppy Teraka miaraka amin'ny tsimok'aretina ety ivelany
Litter teraka miaraka amin'ny tsinay amin'ny ivelan'ny vatana
Puppy Teraka miaraka amin'ny vavony sy ny tratran'ny tratra eo ivelan'ny vatana
Diso, Vet dia vao mainka ratsy
Very alika ny alika ary manomboka mandray alika kely
Alika kely: fandefasana mialoha tsy ampoizina
Alika alika 5 andro mialoha noho ny alika kely maty
Puppy 1 very, voahiry 3
Vokany amin'ny alika kely
Diso ny fanesorana Dewclaw
Fampandehanana sy fampiakarana an-jaza: fitandremana ny hafanana
Manampy sy mitaiza alika be
Fanampiana sy fiompiana alika eo am-piasana
Manampy ny fako miady amin'ny alika kely
Pejin-tsary momba ny fikolokoloana sy ny fiompiana alika
Ahoana ny fomba hahitana mpiompy tsara
Ny mahatsara sy maharatsy ny fananahana
Hernias amin'ny alika
Alika kely malemy
Mamonjy an'i Baby E, alika kely an-damosina
Mitahiry alika kely: Tube Famahanana: Sakan-tsofina
Genitalia ambiguous in alika
Na dia ity fizarana ity dia mifototra amin'ny whelping of an English Mastiff , izy io koa dia misy fampahalalana tsara momba ny alikaola amin'ny alika lehibe. Azonao atao ny mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny whelping ao amin'ireo rohy etsy ambony. Ny rohy eto ambany dia mitantara ny tantaran'i Sassy, ​​Mastiff anglisy. Manana toetra mahafinaritra i Sassy. Tia olona izy ary tia ankizy. Ny Mastiff malefaka amin'ny fomba rehetra sy mahafinaritra ary Sassy kosa dia tsy ny reny tsara indrindra amin'ireo zanany alika. Tsy mandà azy ireo izy fa hikarakara azy ireo rehefa apetraky ny olona azy io hohanin'olombelona, ​​na izany aza tsy hanadio ireo zanak'alika izy na hijery azy ireo. Toy ny hoe tsy zanak'alika izy ireo. Ity fako ity dia mahazo ny rononon-dreniny miaraka amina fifandraisan'olombelona lehibe, manome tanana azy ireo tsirairay avy izay ilaina. Ho setrin'izany, ireo zana-kazo dia hatao sosialy be ary hanao biby fiompy mahatalanjona, na dia mahagaga aza ny asa tafiditra. Mila mpiompy voatokana iray mba hitandroana ny fahasalamana hatrany. Soa ihany fa manana an'io ity fako ity. Vakio ireo rohy eto ambany hahazoana ny tantara feno. Ireo pejy ao anatiny dia misy fampahalalana marobe izay azon'ny rehetra ankasitrahana sy ahazoana tombony.
C-Fizarana amin'ny alika miteraka lehibe
Alika kely vao teraka ... Izay ilainao
Fanampiana sy fiompiana alika kely: lehibe 1 ka hatramin'ny 3 andro
Tsy mandeha araka ny kasainaina foana ny zavatra (imperus anus)
Litter of pups kamboty (tsy ny drafitra)
Fitaizana alika kely 10 andro Plus Plus +
Fitaizana alika kely 3 herinandro
Fitaizana alika kely 3 herinandro - fotoana hanombohana fiofanana vilany
Fitaizana alika kely 4 herinandro
Fitaizana alika kely 5 herinandro
Fitaizana alika kely 6 herinandro
Fitaizana alika kely 7 herinandro
Fiaraha-miasa amin'ny alika kely
Ny alikaola sy ny fiompiana alika lehibe dia lehibe
Whelping sy Raising Puppies, fanajana vaovao hita
Fikorontanana: Raharaha akaikin'ny boky
Tabilaon'ny fandrosoan'ny alika (spreadsheet .xls)
Puppies Puppies Mysti Kiobàna: Plug Mucus Term Term - 1
Kuba Mysti Puppies: Tantara momba ny asa 2
Puppies Kuba Mysti: Tantara momba ny asa 3
Kuba Mysti Puppies: Pups iray andro iray 4
Fandefasana mora iray andro na roa tara
sary an'ny tertera voalavo
Alika kely alika voaloko afrika hamidy